Rumaysad - Daawashada Kaniisadda Dunida ee Dunida 'Switzerland'
Waxaa ka harsan shan illaa lix toddobaad illaa aan u dabaaldegno dhimashada iyo sarakicidda Ciise. Laba waxyaalood ayaa nagu dhacay markii Ciise dhintay oo la sara kiciyey. Midda koowaad waa inaan isaga la dhintay. Tan labaadna waxay tahay in isaga la innaga soo sara kiciyey.
Rasuul Bawlos wuxuu u dhigey sidan: hada hadaad Masiixa la sara kacdeen, raadi waxa kor ku yaal, meeshii Masiixu joogo, oo fadhiya midigta Ilaah. Raadso waxa sare, ma aha waxa dhulka jooga. Maxaa yeelay waad dhimatay oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah. Laakiin markii Masiixu noloshaada shaaca ka qaadi doono, waxaa laydinla muujin doonaa ammaanta agtiisa (Kolosay 3,1: 4).
Sida ku xusan aayadda aan hore u akhrinay iyo aayadaha kale ee dhowr ah, waxaan Masiixa kula noolaaneynaa boqortooyada jannada. Islaantii hore ayaa dhimatay oo is cusub ayaa nolosha timid. Hada waxaad tahay abuur cusub oo Masiixa ku jira. Runta xiisaha leh ee ah abuurista cusub ee Masiixa ayaa ah in hadda naloo aqoonsaday isaga iyo isagaba. Waa inaanaynaan waligeen isku arkin mid gooni ah, sidii Masiixa uga fogaa. Nolosheenna Masiixa ayaa ku qarsoon Ilaah. Waxaa naloo aqoonsaday Masiixa illaa iyo dhex-mara. Nolosheena ayaa ku jirta. Waa nolosheena. Waxaan nahay mid isaga la jira. Waxaan ku nool nahay. Kaliya ma nihin dadka dhulka deggan; sidoo kale waxaan nahay degganeyaasha jannada. Waxaan jecelahay inaan ku qeexo sida ku noolaanshaha laba aag waqti - mid ku meel gaadh ah, jidh ahaaneed iyo mid daa'im ah, aag waqti jannada ah. Way fududahay in la yiraahdo waxyaalahaas. Way ka sii adag tahay in la arko. Laakiin iyagu waa run xitaa haddii aan la halgano dhammaan dhibaatooyinka maalinlaha ah ee aan la kulano.
Bawlos wuxuu ku sharaxay 2 Korintos 4,18 sida soo socota: Annaga oo aynaan arkin kuwa la arki karo, laakiin aan la arki karin. Maxaa yeelay waxa muuqda waa ku meel gaadh; laakiin waxa aan la arki karin waa weligiis. Taasi waa sida saxda ah ee waxaas oo dhami. Taasi waa nuxurka rumaysadka. Markaan aragno xaqiiqadan cusub ee aan Masiixa ku nahay waxay bedeshaa fikirkeena oo dhan, oo ay kujirto waxa aan hadda ku gudbi karno. Markaan isu aragno inaan ku nool nahay Masiixa, waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo ku saabsan sida aan ugu maarayn karno arrimaha noloshan hadda jirta.